Black Shark3နှင့်3Pro တို့သည်မေလ ၈ ရက်တွင်ဥရောပသို့ရောက်ရှိမည်ဖြစ်သည် Androidsis
သူတို့မတ်လအစောပိုင်းတွင်စတင်ခဲ့သည်ကတည်းက Black ကငါးမန်း3နှင့်3Pro ကို ၎င်းတို့ကိုဥရောပဈေးကွက်တွင်တရားဝင်ရရှိနိုင်ခြင်းမရှိသေးသော်လည်းမကြာမီတိုင်အောင်ဖြစ်လိမ့်မည်။
Xiaomi ၏ထုတ်လုပ်သူနှင့် sub-brand ကုမ္ပဏီကယင်းကိုကြေငြာပြီးဖြစ်သည် ဒီအသစ်နှစ်လုံးကို ဂိမ်းကစားခြင်း ဥရောပကိုမေလ ၈ ရက်မှာရောက်မယ်ဤဆောင်းပါးကိုထုတ်ဝေသည့်အချိန်တွင်ရှစ်ရက်ခန့်ကျင်းပသည့်ရက်စွဲတစ်ခု။
Black Shark3နှင့်3Pro တို့သည်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောဂိမ်းစမတ်ဖုန်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤရွေ့ကားအားဖြင့် powered နေကြသည် Snapdragon 865Qualcomm ၏အမြင့်ဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့် chipset ကိုစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ကိရိယာများတွင်သာတွေ့ရသည်။
နှစ် ဦး စလုံးတစ် ဦး ချင်းစီကတခြားရန်အလွန်ဆင်တူဝိသေသလက္ခဏာများရှိသည်, ဒါပေမဲ့သူတို့အများအပြားရှုထောင့်ကွဲပြားခြားနားသည်။ ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်တ ဦး တည်းဖြစ်၏ Black Shark3တွင် ၆.၆၇ လက်မအရွယ် AMOLED panel နှင့် FullHD + resolution နှင့် Pro Pro များတွင် ၇.၁ လက်မ AMOLED မျက်နှာပြင်ရှိပြီး QuadHGD + (6.67K) resolution ရှိသည်။ ဤမိုဘိုင်းဖုန်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအောက်တွင်တွေ့နိုင်သည်။
အနက်ရောင် SHARK 3
မျက်နှာပြင် ၆.၆၇ လက်မအရွယ် AMOLED FullHD + resolution ဖြင့် 6.67 x 2.400 pixels / 1.080 Hz / HDR90 + ၇.၁ လက်မအရွယ် AMOLED QuadHD + (7.1K) resolution2x 3.120 pixels / 1.440 Hz / HDR90 +
ရမ် 8 GB ကို LPDDR4 / 12 GB ကို LPDDR5 8 GB ကို LPDDR4 / 12 GB ကို LPDDR5
ပြည်တွင်းသိုလှောင်မှု 128 / 256 GB UFS 3.0 256 GB ကို UFS 3.0
နောက်ဘက်ကင်မရာ သုံးဆ - ၆၄ MP (အဓိကအာရုံခံကိရိယာ) + ၁၃ MP (အကျယ် ၁၂၀ ဒီဂရီ) +64 MP (field blur effect) သုံးဆ 64 MP (အဓိကအာရုံခံကိရိယာ) + 13 MP (အကျယ် 120 °) +5 MP (field blur effect)
ရှေ့ကင်မရာ 20 အမတ် 20 အမတ်
OS စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်မှုအလွှာတစ်ခုအဖြစ် Joy UI ပါ ၀ င်သော Android 10 စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်မှုအလွှာတစ်ခုအဖြစ် Joy UI ပါ ၀ င်သော Android 10
ဘက်ထရီ 4.720 mAh သည် 65 W မြန်သောအားသွင်းမှုကိုထောက်ပံ့ပေးသည် 5.000 mAh သည် 65 W မြန်သောအားသွင်းမှုကိုထောက်ပံ့ပေးသည်
ချိတ်ဆက်မှု 5G ။ ဘလူးတုသ်။ Wifi 6. USB-C ။ dual-nano SIM ကဒ်အထိုင် 5G ။ ဘလူးတုသ်။ Wifi 6. USB-C ။ dual-nano SIM ကဒ်အထိုင်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Black Shark3နှင့်3Pro တို့သည်ဥရောပသို့မေလ ၈ ရက်တွင်ရောက်ရှိမည်